Muuri News Network » Imaanshiyihiisa Man Utd, Tababare Mourinho & Booska Uu Jecel Yahay Inuu Ka Ciyaaro – Wargeysiga Uu Paul Pogba Siiyay Thierry Henry Oo Faahfaahsan
Imaanshiyihiisa Man Utd, Tababare Mourinho & Booska Uu Jecel Yahay Inuu Ka Ciyaaro – Wargeysiga Uu Paul Pogba Siiyay Thierry Henry Oo Faahfaahsan
Aug 19, 2016 - Comments off
Xiddiga cusub ee Manchester United ayaa caawa la filayaa inuu safto kulankiisii ugu horeysay ee tan iyo markii uu kooxda ku soo laabtay, waxaana uu ka hor kulankaas la fariistay xiddigii hore ee France Thierry Henry oo haatan u shaqeeya Sky Sports.
Waxa uu Henry wax ka weydiiayy sida uu u arko tababare Jose Mourinho iyo weliba kaalintii uu ka geystay inuu dib ugu soo laabto Old Trafford.
“Waa uu iga caawiyay go’aankeyga” ayuu Pogba u sheegay Henry ka hor kulanka caawa ee Premier League. “Waxaad arkeysaa tababare weyn sida isagoo kale ah kaasoo wax badan soo qabtay, wax walbana ku soo guuleystay, marka uu halkaan yimidna waxa uu keensaday ciyaartoy isagoo doonaya inuu wadada guusha ku laabto.
“Waxaan afar sannadood ka ciyaarayay Italy, haddii uu imaan lahaa United labo sanno ka dib markii aan ka tagay, malaha ma aanan imaadeen haatan, waxaan sii joogi lahaa Juve.
“Waxaa qabaa inay tahay waqtigii ku haboonaa ee uu imaan lahaa halkaan iyo waqtigii aan aniga halkaan ku soo laaban lahaa.”
Pogba ayaa ganaax uu kala yimid Italy ku seegay kulankii furitaanka xilli ciyaareedka Premier League ee ay Man United ka badisay Bournemouth, waxaana uu wadada u saaran yahay inuu caawa safto kulankiisii ugu horeysay.
Henry ayaa weydiiyay sida taam ahaanshihiisa uu yahay: “Waan fiicanahay, waan imiday waxaana tababare u sameynayaa si adag. Waxa igu amreen inaan kaligeey tababar sameeyo madaama aanan ciyaarin kulankii ugu horeysay. Waxa ay igu amreen inaan ordo, xaqiidiina waan jeclahay sidaan sababtoo ah waan u soo bartay markii aan joogay Juve.
“Jir ahaan iyo maskax ahaan aad ayaan u fiicanahay. Tababarka waxa uu ahaa mid fiican. Waxaan taabtay kubada in badan, sidaasna uma baranin inaan sameeyo. Tababarka aad ayuu u fiican yahay.”
Pogba ayaa xulka France uga ciyaarayay booska burburiyaha khadka dhexe, Henry ayaana weydiiyay booska uu jecel yahay inuu ka ciyaaro, waxa uu ku jawaabay:
“Booskeyga iigu fiican waa khadka dhexe weliba garabka bidix. Haddii lagu ciyaarayo seddex khadka dhexe ah waxaan ka ciyaari karaa midig ama bidix, laakiin waxaan ku fiicanahay oo aan raaxo ku dareemaa bidixdeyda.
“Waan ka ciyaari karaa booska burburiyaha khadka dhexe, laakiin waxaan dareemaa raaxo marka hore u yara dhaqaaqo.”